Raw Formestane (566-48-3) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Formestane (566-48-3)
SKU: 566-48-3. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee loo yaqaan 'Formestane' (CAS 566-48-3), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Oestor wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee nooca, nooca I, aromaticase inhibitor ah oo loo isticmaalo daaweynta kansarka naasaha 'estrogen-positive reseptor' ee dumarka post-menopausal. Formestane waxay xakameysaa waxsoosaarka estrogen ee ka yimaada stabdhabyada anoholiska ah ama hormoonada. Waxa kale oo uu u dhaqmaa sida wax u tarayso 4-hydroxytestosterone, ...
Calaamadaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah
Formula kelli: C21H30O3
Dhibcaha Biyaha: 199-202 ° C
Qalabka loo yaqaan "Formestane" (566-48-3) ee wareegga steroid
Formestane (566-48-3), oo loo yaqaan 'lentaron', magaca kiimikada: 4-hydroxyandrostenedione.
Hagaajinta (566-48-3) Isticmaal
Nooca ugu caansan ee lagu iibiyo xabadka ayaa ku jiray qaab jilicsan oo loo yaqaan '100-200mgs per application. Isticmaalayaasha waxay u adeegsan doonaan maqaarka nadiifka ah, qalalan iyo si fiican u xoqin; inta badan bowdada ama gacmaha sare. Waxay qaadatay 1 daqiiqado 5 si ay u qalalaan. Nooca la isku duro ee loogu talagalay ujeedooyinka kansarka naasaha iyo jidh-dhisayaasha waa 125mgs laba jeer toddobaadkii ama 250mgs hal mar toddobaadkii.
Digniin ku socota Formestane
Formestane (CAS 566-48-3) ma keeno waxyeello farabadan haddii aan lagu xadgudbin. Mararka qaarkood jir-dhiseyaasha waxay ka cabanayaan is-goysyada qalalan, isbeddelka niyadda, isbeddelada libido, ama finanka, kuwaas oo ah kuwa caadiga ah ee dhammaan AI. Waxyeellada kale ee soo raaca waa heerka HDL (wanaagsan) kolestaroolka, sidaas darteed waa inaad daawataa cuntadaada.
Formestane waa jiilka labaad, aan laysku halleyn karin, aromaticase inhibitor ah. Waxay ka hortagtaa enzyme aromaticase ka masuul ah beddelidda androgens ee estrogens, taas oo ka hortagga wax soo saarka estrogen.
Kansarka naasku wuxuu noqon karaa mid xasaasi ah ama xasaasiyad. Inta badan kansarrada naasaha ayaa ah dareen-celinta estrogen. Unugyada kansarka naasaha ee xasaasiga ah waxay ku xiran yihiin estrogen si waxtar leh. Sidaas awgeed, ka-qaadista estrogen-ka jirka wuxuu noqon karaa daaweyn waxtarka leh ee kansarka naasaha ee xasaasiga ah.
Formestane ayaa si gaar ah loogu beegay gaar ahaan daaweynta dumarka postmenopausal. Ayadoo ka duwan haweenka premenopausal ee soo saara estrogen ee ugu badan ugxan, haweenka postmenopausal waxay soo saaraan unugyada ugu badan ee unugyada dillaaca iyagoo caawinaya macdanta aromatase. Soestane (566-48-3), aromatase inhibitor, ayaa ka caawin karta hoos u dhigida wax soo saarka deegaanka ee estrogen by xannibista enzyme aromaticase ee unugyada peripheral (ie, naas nuujinta naaska) si loo daaweeyo kansarka naasaha ee xasaasiga ah.
Sida loo soo iibsado Formestane laga bilaabo AASraw